Ithela aboHlanga ngendle: IDA isolwa ngokuhloba ngehlazo - Bayede News
Ithela aboHlanga ngendle: IDA isolwa ngokuhloba ngehlazo
Umbiko we-IMF uveza ukuthi umnotho waseChina uyadlondlobala
Amakhosana namakhosazana sebefuna okwakwabo. Abanye aboHlanga sebehlalele iphalishi
Cishe sebekwenze konke. Bagcwalise izinkundla bandisa nabavoti ngezikhathi zokhetho. Baliqoma iqembu phezu kwengcindezi belivikela nasezinsolweni zobuhlanga. Laba ngabaholi namalungu aboHlanga kuDemocratic Alliance (DA).
Ngakolunye uhlangothi abaholi babelungu abaqavile kuleli qembu bayaqhubeka nokwenza izinkulumo ezijivaza nezethuka aboHlanga. Okwakamuva ukukhuluma kuvele kuloyo owayengumholi weqembu kusuka ngowe-1999 kuya kowezi-2007, uMnu u-Anthony James Leon odume ngelikaTony. Lo mholi ucashunwe kuleli sonto efanisa lowo owayengumholi wokuqala woHlanga weqembu kusuka ngowezi-2015 kuya kowezi-2019, njengomantolombane, ethi obekuyilinge labo akuhambanga kahle. Lokhu kukhuluma kubatshazwe ngabaningi nabakuhumushe njengenkulumo enobuHlanga.
UMaimane nosewashiya kuDA waphuma inxiwa wahola umshikashika omusha obizwa nge-One SA Movement, uphawulile ngalokhu okushiwo ngaye wasola uLeon ngokumeya nokungamhloniphi. “Ubuqha obungayiwa obucisha umsebenzi wami, ubuqotho bami kanye nokuzithoba kwami …. uziveza ubuwena futhi ungahloniphi. Eqinisweni, uyangihlaza,” kusho uMaimane.
Ube eseveza umlando wokungaboni ngasolinye noLeon. Kulokhu uthe iqale ukumcijela imikhonto ngesikhathi uLeon emsola kokuphakamisa ukuthi iDA ayibe nomcimbi wokubungaza uNkk uKaMadikizela Mandela ngonyaka wezi-2018 nathi wabe ekuphakamise ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi iqembu linabela nakweminye imiphakathi.
“Umsebenzi wokujivaza sekuyinto ewumlando. Ngiphatheke kabi nobekushiwo kungilimaza, kodwa akungimangazi. Kwelinye izinga, kufanele uhlehle ubuke bese uthi kusho lukhulu ngabo labo ababeka amabala kunalabo ababekwa amabala. Uhambo oluya eNingizimu Afrika engacwasi ngobuzwe lusazoba lude lube nzima ngoba kuzoba nabantu abathi kwabanye bangamalinge futhi kufanele uqinise ukuzimisela kwakho,” kuphawula uMaimane.
Inkulumo kaLeon ibukeka yakhela iqembu ingcindezi njengoba bese kukhona vele abathi imizamo yalo yokuzibeka njengeqembu ‘lawo wonke umuntu’ iyafadalala. Lezi zinkulumo ziqine kakhulu ngesikhathi amalungu angamaphesenti angama-80% evotela umholi womlungu uMnu uJohn Steenhuisen enqaba uNks uMbali Ntuli nowayengaba ngowokuqala woHlanga wesifazane ukuhola iqembu. Kwenzeka lokhu nje esinye isikhundla esiphezulu eqenjini sikaSihlalo weFederal Council siphethwe ngumlungu, uNkk uHelen Zille.
ULeon uthi umile kulokhu akushoyo nathi kaboni sici kukho ngoba nabanye kwabezindaba bake basho okufanayo. “Ngempela bekuyilinge, into ehlukile, into engakaze yenziwe muntu, Kujivaza kanjani lokhu? Ngiyaqonda abantu bathukuthele, bahlupheka emazingeni ahlukene, yisimanga,” kusho yena.
Ngesikhathi etshelwa ukuthi abantu baphatheke kabi njengoba isitatimende sakhe sivuse uhlevane saba khumbuza isikhathi uSarah Baartman esetshenziswa njengelinge. ULeon uthe: “Ngiyaxolisa uma kukhona abantu abahlukumezekile.” Ube esethi uma kukhona abaholi beqembu boHlanga abathintekile ngalokhu akusho embhalweni nasenkulumweni yakhe, banazo izinombolo zakhe zocingo bangamthinta angaxoxa nabo.
“Kunentukuthelo enkulu ekhona nje kubantu ngenxa yesimo esikhona njengamanje futhi kuningi okuvelayo ngeso eliyingxemu. Ngicabanga ukuthi akubangwa engikushilo kodwa kuqhamuka emaphuzwini asemqoka asencwadini. Ngiyamangala ukuthi uMmusi lolu daba akazange aluqondise kuSowetan lokuthi ilinge selibhuntshile. Ngehla ebuholini ngowezi-2007, uMmusi wayesavotela i-ANC ngalezo zinsuku. Uqale eqenjini ngowezi-2010, ngangingenandaba nemibono eyenzeka ebuholini beqembu, kwakuwumsebenzi walowo owangilandela,” kusho uLeon.
Abaholi boHlanga banemibuzo
Abanye abaholi boHlanga ngaphakathi nangaphandle kweDA baphawulile ngalolu daba. Obengumholi weqembu KwaZulu-Natal, uMnu uZwakele Mncwango ucashunwe ethi: “Ilinge elibhuntshile” kuthunaze indlela yokukhetha abaholi kuDA kwethuka ubuchule bazo zonke izithunywa ezingqungqutheleni.
OwayenguNobhala Jikelele we-Economic Freedom Fighters (EFF) uMnu uGodrich Gardee, uthele usawoti esilondeni ngesikhathi ebhala ezinkundleni zokuxhumana ngalolu daba.
Uthe okushiwo nguLeon akukusha njengoba ike yazama okufanayo ngeNational Freedom Party. “UMbali Ntuli, uPhumzile Van Damme, uPalesa Morudu, nabanye odadewethu nabafowethu boHlanga niyazi ukuthi ningamalinge bokwenza mhlophe (experiments of whiteness),” kusho uGardee.
Umholi we-ActionSA KwaZulu-Natal, uDkt uMakhosi Busisiwe Khoza ukhwele wadilika kuLeon namsole ngobandlululo. OkaMsuthu uthe sekuyisikahthi sokuthi kubhekwane ngqo nalabo abafana nabacabanga njengoLeon. Wexwayisa ukuthi akungacatshangwa ukuthi kuliwa nje nenkohlakalo eyamaniswa noKhongolose ngoba ngomfutho ofanayo bayalwisana nabacabanga njengoLeon. Abafundi belaboHlanga nabo baphawulile ngalolu daba.
UMnu uZibusisozethu uthe: “Inhloso yabo abelungu kwakudotshwa thina boHlanga ukuthi sihunguke sigqishe kwelabo iqembu kanti nathi sinolwethu utavatava lwamaqembu siyindlu emnyama. Yebo bakhona abayidlanzana abahunguka bethi bayodlela sitsheni sinye nabelungu kanti ababoni ukuthi bona bawummbila iqembu isife sokugola aboHlanga, ngenhlahla ummbila wabona ukuthi kusetshenziswa wona ukubamba inyamazane.”
Kwathi uMnu uShlang’sembongolo Mhlongo yena wathi: “Akuyona inhlamba, uMaimane akayenzanga le nto iDA eyayimfakele yona esikhundleni, naye ayethembise ukuyenza. Ngakakho-ke “ilinge aliphumelelanga” ngoba aliyifezanga inhlosongqangi. Inhloso yokufaka owoHlanga kwakungukuqokelela amavoti amaningi, hhayi ukulwa ne-ANC. Awubukisise futhi sibheke ukuthi ngubani odidekile.”
UMnu uSfiso Popoli ume kwelokhuthi: “Empeleni bonke osopolitiki boHlanga bangoMgijimi. Bonke kufaka phakathi uRamaphosa, uZuma, uMandela kanjalo noMbeki. Bonke basebenzela abelungu, kanjalo naye uMalema we-EFF. Babanjwe ngobhongwana.”
UMnu uSipho Mbatha uhambe kulawo magama wenaba: “Iqiniso lithi cishe bonke abaholi abakuDA nasebashiya bangomantolombane. Sizokhumbula uLindiwe Mazibuko washiya isigubhukane kuleli qembu. Kwavela ukuthi uyoqhuba izifundo phesheya, kepha kwavela futhi ukuthi yingoba engasahoshelani nabaholi beqembu ngenxa yokuthi akasafezekisi izinhloso zeqembu, usefuna ukufeza izinhloso zokubhekelela naboHlanga ngempilo engcono. Umfo kaMaimane, umfo kaMashaba kwaba yiso leso.
“NoPhumzile Van Damne nakuba eseseyingxenye yeDA, kodwa ugudluliwe esikhundleni abesiphethe, nakho lokho kwasolisa ukuthi yingoba enqindwa amandla athile ukuze angavusi umhlwenga njengebhubesi phambi kwabamhlophe. Kuyacaca ukuthi nalabo abampisholo abasayibambile kuDA njengoMaNtuli nabanye basengabagijimi emehlweni eDA. Futhi baqashwe ngeso lokhozi ukuthi bangagudluki ezinhlosweni zabelungu, ngoba uma beke beqa umugqa bayobe sebekhonjwa indlela. Okokugcina ibukeka iDA isazoba nabo abaholi namalungu aboHlanga nakuba bengomantolombane ngenxa yokuthi bazuza imiholo ukuze bavike inkemane kunokuvikela isithunzi somAfrika.”
Ozul azayithole Apr 9, 2021